Kugonesa Kugonesa | Martech Zone
Matekinendi ekugonesa matekinoroji, kusanganisira mapuratifomu ehukama hwevatengi, anotendera makambani kuunganidza, kuona uye kutsvagisa tarisiro, ichivabatsira kugadzirira zviitiko zvine chekuita nekutengesa uye zvinobudirira uye zvine hungwaru kutaurirana mabhenefiti avo uye maficha kumutengi.
Plezi Imwe: Chishandiso Chemahara Chekugadzira Inotungamira Neyako B2B Webhusaiti
Chipiri, January 4, 2022 Chipiri, January 4, 2022 Paul-Louis Valat
Mushure memwedzi yakati wandei mukugadzira, Plezi, SaaS yekushambadzira otomatiki software mupi, ari kutangisa chigadzirwa chayo chitsva muruzhinji beta, Plezi One. Ichi chemahara uye intuitive chishandiso chinobatsira madiki uye epakati-saizi makambani eB2B kushandura webhusaiti yavo yekambani kuita saiti inotungamira yechizvarwa. Tsvaga kuti inoshanda sei pazasi. Nhasi, 69% yemakambani ane webhusaiti ari kuyedza kuvandudza kuoneka kwavo kuburikidza neakasiyana nzira sekushambadzira kana masocial network. Zvisinei, 60% yavo
Muvhuro, Zvita 27, 2021 Muvhuro, Zvita 27, 2021 Stephanie Shreve
Iwo mabhurendi akakura anowana, zvikamu zvinofamba zvakanyanya zvinoonekwa. Zvigadzirwa zvinotengeswa kuburikidza netiweki yevatengesi vemunharaunda vane zvakatooma kunzwisisa seti yezvibodzwa zvebhizinesi, zvinonyanya kukosha, uye zviitiko zvepamhepo zvekufunga nezvazvo - kubva pachiratidzo chemhando kusvika padanho renzvimbo. Zvigadzirwa zvinoda kuwanikwa zviri nyore uye kutengwa. Vatengesi vanoda mitsva mitsva, kufamba kwetsoka, uye kuwedzera kutengesa. Vatengi vanoda ruzivo rusina kupokana kuunganidza uye ruzivo rwekutenga - uye vanochida nekukurumidza.
Muvhuro, Zvita 13, 2021 Muvhuro, Zvita 13, 2021 Douglas Karr
Masvondo mashoma apfuura, ndanga ndiri pane saiti uye ndakaona pandakadzvanya chinongedzo chekuronga kusangana navo kuti ini handina kuunzwa kunzvimbo yekuenda, paive newijeti yakaburitsa iyo Calendly scheduler zvakananga muhwindo rinobuda. Ichi chishandiso chikuru… kuchengeta mumwe munhu pasaiti yako chiitiko chiri nani pane kumutumira kune peji rekunze. Chii chinonzi Caendly? Calend inobatanidza zvakananga neGoogle yako
7 Automated Workflows Iyo Inoshandura Yako Yekushambadzira Mutambo
Chishanu, December 10, 2021 China, December 9, 2021 Chintan Jain
Kushambadzira kunogona kukurira kune chero munhu. Iwe unofanirwa kutsvagisa vatengi vako vavanoda, kubatana navo pamapuratifomu akasiyana, kusimudzira zvigadzirwa zvako, wozotevera kusvika wavhara kutengesa. Pakupera kwezuva, zvinogona kunzwa sekunge wanga uchimhanya marathon. Asi haifanirwe kunge ichiremedza, ingo shandura maitiro. Automation inobatsira mabhizinesi makuru kuti aenderane nezvido zvevatengi uye mabhizinesi madiki arambe akakodzera uye achikwikwidza. Saka, kana
Kutengesa Kugonesa Sponsor